Video: 8 Ladies Show 2011 @ KL, Malaysia | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: 8 Ladies Show 2011 @ KL, Malaysia
ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ 8 Ladies Show Concert ဗီဒီယို
Here is the video of "8 Ladies Show" Live Music Concert which was held on 4th February 2011 at Chin Woo Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia. Myanmar popular female singers; May Khalar, Phyu Phyu Kyaw Thein, Kaw Ni, Chit Thu Wai, Thazin, L Sai Zi, N Kai Yar and Rebecca Win performed for this Live Music concert. Myanmar model and actress, Moe Hay Ko also performed for this concert as the Special Guest. Most Audiences enjoyed with the hot fashion of singers.
sai_bruceFebruary 12, 2011 at 4:33 AMmuch better than previous 8 ladies show..ReplyDeletesweetFebruary 12, 2011 at 5:22 AMတကယ့်အဆိုတော်ကောင်းတွေမို့လားမသိအရမ်းကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါ....သီချင်းကောင်းအဆိုကောင်းတွေနဲ့ ...... ကြည့်ရသူတွေအတွက်တကယ့်ပျော်ရွှင်စိတ်အပန်းပြေစရာပါ....မိုးဟေကိုလည်းသီချင်းဆိုတာအသံကကောင်းပါတယ်.........ဒီလိုပွဲလေးတွေများများလုပ်နိုင်ပါစေ...ReplyDeleteThetFebruary 12, 2011 at 8:02 AMအတော်ကောင်းတဲ့ ပွဲပါ။ လူတချို့ အဆုိုတော်မိန်းကလေးတွေကုို ရက်ရက်စက်စက် ဝေဖန်တဲ့ ကိစ္စဟာ မသင့်လျှော်ဘူး။ အက်ဒမင်က ဒါတွေ ဖေါ်ပြပေးဘုို့ မသင့်ဘူး။ReplyDeleteကောင်းကင်ယံFebruary 12, 2011 at 9:51 AMမဲမဲကျော်သိန်းရေငါထမင်းတောင်မျိုမကျတောဘုးReplyDeletepaingsoeFebruary 12, 2011 at 10:10 AMsai_bruce said... much better than previous 8 ladies show.. February 12, 2011 4:33 AM sweet said... တကယ့်အဆိုတော်ကောင်းတွေမို့လားမသိအရမ်းကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါ.... သီချင်းကောင်းအဆိုကောင်းတွေနဲ့ ...... ကြည့်ရသူတွေအတွက်တကယ့်ပျော်ရွှင်စိတ်အပန်းပြေစရာပါ.... မိုးဟေကိုလည်းသီချင်းဆိုတာအသံကကောင်းပါတယ်......... ဒီလိုပွဲလေးတွေများများလုပ်နိုင်ပါစေ... February 12, 2011 5:22 AM Thet said... အတော်ကောင်းတဲ့ ပွဲပါ။ လူတချို့ အဆုိုတော်မိန်းကလေးတွေကုို ရက်ရက်စက်စက် ဝေဖန်တဲ့ ကိစ္စဟာ မသင့်လျှော်ဘူး။ အက်ဒမင်က ဒါတွေ ဖေါ်ပြပေးဘုို့ မသင့်ဘူး။အဲဒီလို ကွန်မန့်ရေးမယ့်သူ ရှိသေးမှန်း သိရလို့ စိတ်ချမ်းသာ တယ်ဗျာ .. မြန်မာ ချင်ချင်း အပုတ်ချနေတာ ကြည့် မကောင်းလွန်းလို့ ...ReplyDeletenyiFebruary 12, 2011 at 8:24 PMhote pahote paReplyDeletesawFebruary 13, 2011 at 4:47 AMhta min myo ma kya yin le , ma sar nae pop...........ma phyu nae bar sai lo le ........ReplyDeleteတွတ်ပီFebruary 14, 2011 at 7:02 AMကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာတော့ရှိုးပွဲဆိုရင် စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တင်လန့်သွားကြပြီ။မှတ်မိသေးတယ်။2010ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့။ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့တုန်းကပေါ့။စိုင်းစိုင်းရယ် ဟဲလေးရယ် ချမ်းချမ်းရယ် မိုးမိုးရယ် အေသင်ချိုဆွေရယ် ရှိုးပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ဘတ်300နဲ့ဝယ်ကြည့်တာ စိုင်းစိုင်းမပြောနဲ့ခွေးတစ်ကောင်တောင်စင်ပေါ်တက်မလာဘူး။ReplyDeletehtin aungFebruary 17, 2011 at 10:09 PMYON SA YAR KAUNG LO PAL. AKAUNG SONE ASO TAW.(KYAUK SAYAR)ReplyDeletemoeFebruary 23, 2011 at 6:55 PMတော်တယ်ReplyDeleteminnayMarch 10, 2011 at 10:41 PMမဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဆိုမှုဆိုဟန် ပါဖောင်းမေ့တွေကတော့ သောက်ရမ်းကိုလန်းတယ်ဗျာReplyDeleteAdd commentLoad more...